जीवनसाथीले त धोका दियो नै,स्वास्थ्यले पनि छाडेन बाग्लुङकी सुशिलालाई ! – Khoj Dainik
जीवनसाथीले त धोका दियो नै,स्वास्थ्यले पनि छाडेन बाग्लुङकी सुशिलालाई !
January 11, 2021 adminLeaveaComment on जीवनसाथीले त धोका दियो नै,स्वास्थ्यले पनि छाडेन बाग्लुङकी सुशिलालाई !
बागलुङ : मृगौलाको समस्याबाट प्रताडित निसीखोलाकी एक महिलाले सहयोगको अपिल गरेक छिन् । निसीखोला गाउँपालिका—१ की ३३ वर्षीय सुशिला पुनले मृगौलाको समस्यापछि उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएकोले सहयोगको याचना गरेकी हुन् ।
पीडित पुनको पहिले युनाईटेड मिसन अस्पताल पाल्पामा त्यसपछि भैरहवाका युनिभर्सन कलेज अफ मेडिकल साईन्समा उपचार भए पनि सफल नभएपछि अलिहे पोखरा मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ ।
गएको १९ महिना यता उनको दुबै मृगौलाले काम गर्न छोडेको हो । ११ महिनायता नियमित डाईलासिस गरिएको र त्यसका लागि मासिक ३० हजार खर्च हुने गरेको दाजुले बताए । ‘घरको आर्थिक अवस्थामा कमजोर छ, उपचारमा ठूलो रकम खर्च भैसक्यो अझै पनि कति खर्च हुने कुनै टुंगो छैन,’ उनले भने,
आफ्नो नागरिकता समेत नुहुँदा बैंक खाता खोल्न समेत नसकिएको पीडितको गुनासो छ । मृगौला पीडित पुनका दाजुले शुशिला पुन बचाउ अभियान मार्फत उनको जीवन रक्षाका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गरिएको बताए ।
बागलुङ नगरपालिका—९ तित्याङका वडाध्यक्ष गणेश थापाले आर्थिक समस्यामा उपचार नपाएकी सशिलालाई सबैले सहयोग गर्न आग्रह गरे । उपचारका सहयोग गर्न चाहानले उनका दाजु भक्तबहादुरको प्रभु बैंकमा रहेको खाता नम्बर
०५९००४८७८०१०००१२ मा रकम जम्मा गर्न सक्ने सहयोग संकलन समितिले जनाएको छ । बागलुङ पोस्ट
दु’खद खबर : मोटरसाईकल दु:र्घ’ट’नामा परी श्रीमान श्रीमतिको एकैपटक ज्या’न ग’यो !